Maalinta: Meey 7, 2019
Dhibaatada Joojinta Isbitaalka Finike State Solved
Dowladda Hoose ee Antalya, Finike Sahilkent oo ku taal Isbitaalka Gobolka ee Isbitaalka Gobolka 140-sar ayaa xallisay dhibaatada joogsiga. Hoteelka hortiisa dadka muwaadiniinta ah ee isbitaalka ayaa laga ilaaliyay kuleylka xagaaga, joogsiga roobka xilliga qaboobaha ayaa la rakibay. Dowlada Hoose ee Antalya [More ...]
Maqnaanshaha dhabta ah ee Isbedelka Baaskiilada?
Dhismaha buundooyinka casriga ah waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan oo cajiib ah. Mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan heerkan injineeriyadda ayaa ah isbeddelkiisa joogtada ah iyo horumarintiisa, iyo ilaa iyo hadda 21. Qaar ka mid ah buundooyinka ugu layaabka badan qarnigii [More ...]
Hawlaha Imtixaanka iyo Dejinta ee ERTMS Tababarka ayaa la qabtay!
Ururka Rail Systems Association waxaa aasaasay injineerroyinka nidaamka tareenka ee 2014 iyadoo ay la socdaan khabiirada qaybta, aqoonyahano iyo aasaasaha Jaamacadda Karabük. Ururka Nidaamka Tareenka ee nidaamyada tareenka dalkeena iyo nidaamyada tareenka [More ...]
Buundada Hulusi Akar Boulevard Junction
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay buundo u samayn doontaa Gen. Hulusi Akar Boulevard-Aşiyan Street Junction. Sagaal shirkadood ayaa ka qeybgalay qandaraaska. Dowladda Hoose ee ku dhawaad ​​4 milyan oo ah 600 kun oo TL oo u dhiganta qandaraaska buundada [More ...]
Ankara-Sivas YHT Khadadka Tijaabada ah ee la sameynayo
"Turkey, Russia iyo Azerbaijan Tareennada u dhaxaysa Baku-Tbilisi-Kars (BTK) Memorandum of Fahamka on Iskaashiga Xaflada ka Saxiixa Railway Route" 07 May 2019 Tuesday dhacay xarunta Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Ankara JW Marriot [More ...]
Irmak Zonguldak Line Km 367 + 079 Chaycuma Overpass Bridge Shaqada Dhismaha Asphalt
Khadka Irmak Zonguldak Km 367 + 079 Çaycuma overpass Bridge Asphalt Construction Work Tender Result TC State Railways Maamulka TCDD 2, Agaasinka Adeegga Iibsiga Gobolka (TCDD) 2019 / 146795 GCC [More ...]
Indigenous Studies Motor dalka Turkiga
19 waa mashiinka naaftada ee ugu horreeya ee loo yaqaan '20 diesel' oo ay siiso bini-aadamnimada injineerka Jarmalka Rudolf Diesel markii ugu horreysay dabayaaqadii qarnigii 19aad. qarnigii ayaa dhammaystiray horumarintiisii ​​teknolojiyadda qaybtii labaad. Dalkeenna markii ugu horreysay 1956 Prof .. Dr. [More ...]
Rakaabkii milkiilayaasha ee 15,7 ayaa duulimaadyadii bishii April
Agaasinka Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ), Abriil, Duullimaadyada diyaaradaha ee 2019, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaciyey. Marka loo eego, bishii Abriil ee 2019; Diyaaradda ayaa soo degaysa oo ka degeysa madaarrada [More ...]
Dadka reer İzmir waxay jecel yihiin codsiga gaadiidka dadweynaha
Toddobaadkii ugu horreeyay ee mashruuca "Gaadiidka Dadweynaha", oo uu saxeexay İzmir Duqa Magaalada Magaalada Tunç Soyer, ayaa laga tegay. Codsiga, oo ay ka mid tahay kala goynta jadwalka safarka gaadiidka dadweynaha inta lagu jiro saacadaha mashquulka badan ee subaxa iyo fiidka [More ...]
Ogeysiis Dadweyne IETT!
Agaasinka guud ee IETT Shirkadaha waxay sameeyeen bayaan ku saabsan sheegashooyinka aan macquul aheyn ee la xiriira adeegyadooda qaar ka mid ah qaybaha warbaahinta. Qoraalka qoraalka ah ee ay soo saartay IETT waa sidan soo socota; Hindisooyinka ay khuseyso warku ma ahan heshiis kiro ama shirkad gaar loo leeyahay. [More ...]
BTS, Shaqaalaha Gaadiidka TCDD ee loo gudbiyay Dhibaatooyinka Arikan
Midowga Shaqaalaha Shaqaalaha Gaadiidka (BTS), TCDD Taşımacılık A.Ş. Maareeyaha guud Erol Arıkan oo ku saabsan dhibaatooyinka ka jira goobaha shaqada. Madaxweynaha BTS Hasan Bektaş iyo General Law TİS iyo [More ...]
Aktas Holding ayaa xooga saaraya Hindiya nidaamka Tareenka
Aktaş Holding, oo u soo saarta suuqyada kala duwan iyada oo ka faa iidaysanaysa qaab dhismeedkeeda ballaaran ee adduunka, ayaa diiradda saartay Hindiya nidaamyada tareenka. Golaha Fulinta ee Aktaş ayaa sheegaya inay u wareegayaan inay noqdaan mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu muhiimsan Hindiya [More ...]
Türkiyenin'n mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ugu muhiimsan iyo dabeecadda kuwaas oo heli doona digniin ah inay Uludag yimid baabuur cable. Bursa-Uludag, oo bixisa gaadiid kale duwan oo u dhexeeya adeegga dayactirka xariijinta gawaarida ayaa la sameyn doonaa fasax bil ah. [More ...]
Ramazan Raadinta Gaadiidka Dadweynaha ee Trabzon
Duqa Magaalada Caasimadda Trabzon Murat Zorluoglu, oo gobolka oo dhan ku yaal inta lagu gudajiray jadwalka basaska ramadaanka Ramadaan, ayuu yidhi. Isagoo sheegaya in muwaadiniintu cusboonaysiinayeen xilligooda baska si ay guriga ugu fududaan karaan wakhtiga afurka [More ...]